सेयर बजारमा मन्दी, अब कहिले पूरा हुन्छ लगानीकर्ताको अपेक्षा ? – Puleso
सेयर बजारमा मन्दी, अब कहिले पूरा हुन्छ लगानीकर्ताको अपेक्षा ?
By:Puleso3 Published Date: आइतवार, माघ २८, २०७४
सेयर बजारको मन्दी अझै हट्न सकेको छैन । कतिपय लगानीकर्ताले आइतबारदेखि बजार विस्तारै सुध्रिने अपेक्षा गरेका थिए । तर नेप्से भने अझै सुस्त नै देखिएको छ । बजार खुलेदेखि नै नेप्से साइटमा केही प्राविधिक समस्या आएकाले पनि आइतबार कतिपय लगानीकर्ताले बजारको वास्तविक गतिविधि थाहा पाउन सकेनन् । यसले पनि कारोबारीलाई केही अन्योल बनाएको देखिएको छ । तर ब्रोकर कार्यालयमा गएर हेर्नेहरुले भने सबै जानकारी लिन सकेका थिए । लामो समयदेखि सेयर बजार सुस्त हुँदै आएको छ । प्रत्येक दिनजसो लगानीकर्ताहरु भने बजार बढ्ने अपेक्षामा बसिरहेका हुन्छन् । बजार लगातार घट्नुपर्ने ठोस कारण नरहेको पनि लगानीकर्ताहरु बीच बहस हुने गरेको छ ।
बजारमा किनेर बसेकाहरु अब विस्तारै बढ्ने अपेक्षामा छन् । बिक्री गरेकाहरु भने अझै बजार तल झर्ने अनुमान र तर्कहरु प्रस्तुत गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताहरु बीच हुने यी स्वभाविक प्रतिक्रिया पनि हुन् । बिक्री गरेकालाई बजार थप घटे अझै सस्तोमा किन्न पाइन्छ भन्ने लाग्नु स्वभाविक हो । यस्तै, किनेर बसेकालाई अब बजार बढ्छ वा बढ्नुपर्छ भन्ने आत्मविश्वास जागृत हुनु पनि अन्यथा होइन । किनेर बसेकाहरुले सकारात्मक आशा गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर बजारले भने दुवै थरीका लगानीकर्ताको कुरा सुनेको हुँदैन । आफ्नै गति र प्रवृत्ति बजार अघि बढ्ने गर्छ ।
अझै घट्छ वा अब बढ्न थाल्छ भनेर कसैले पनि ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । तर विगत डेढ वर्षयता बजार वियरिस प्रवृत्तिमा छ । अधिक आपूर्ति नै बजार घट्नुको प्रमुख कारण मानिएको छ । कम्पनीहरुले भारीमात्रामा चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्दा त्यसको असर प्रतिसेयर आम्दानीमा देखिएको छ । साथै, सेयर संख्या अधिक मात्रामा थपिंदा आपूर्ति पनि निकै बढेको छ । यसले बजारलाई तल झारेको हो भन्नेमा लगभग सबै लगानीकर्ता र विश्लेषक सहमत भइसकेका छन् । यसैगरी, बैंकहरुमा लगानी गर्ने तरलता अभाव हुनु र ब्याजदर महँगो हुनुले पनि लगानीकर्तालाई मारमा पारेको छ ।
बजार नाप्ने नेप्से सूचक आइतबार ६.३२ अंकले घटेर १३८४.७१ अंकमा आइपुगेको छ । समग्रमा बजार ०.४५ प्रतिशतले घटेको हो । कुल १५९ कम्पनीको २४ करोड ४२ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको सेयर कारोबार भएको छ । ६ लाख ७० हजार ५८९ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । नेप्सेमा कारोबार भएका १० वटा समूहमध्ये व्यापारिक समूहको सूचकमा कुनै पनि परिवर्तन भएको छैन । बाँकी सबै समूहका सूचक राता भएका छन् । कारोबार रकममा ओम डेभलपमेन्ट बैंकको संस्थापक सेयरले अग्रता लिएको छ । ओमको १ करोड ७४ लाख रुपैयाँभन्दा धेरैको संस्थापक सेयर कारोबार भएको हो । यसैगरी, कारोबार रकमकै आधारमा दोस्रो र तेस्रो स्थानमा क्रमशः कालिका माइक्रोक्रेडिट डेभलपमेन्ट बैंक र नबिल बैंक परेका छन् ।
सरकारी बाँकी नतिर्ने ११९ को तीनपुस्ते सार्वजनिक , ३५ दिनभित्र नबुझाए सम्पत्ति जफत
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ४० वर्ष अघिदेखिको अर्बौं रुपैयाँ वक्यौता नबुझाउने ११९ जना व्यक्तिको तीनपुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै ३५ दिनभित्र बाँकी विस्तृतमा...